पोखरा, २२ भदौ । बाढीपीडितको सहयोगार्थ शुक्रबार शुक्रबार पोखरास्थित प्रदर्शनीकेन्द्र नयाँबजारमा लाइभ कर्न्र्सट हुँदैछ । एसओएस गण्डकीका कक्ष्या ११ र १२ मा पढ्ने बिद्यार्थी तथा युवा संजाल नेपालको संयुक्त आयोजनामा हुने उक्त कर्न्र्सटमा पोखरामा विगतदेखि सामाजिक कार्यमा सक्रिय फेसबुक समूह वि आर वान, योर्स र्डर्टस फाउन्सडेन, दारी ग्याङ, युथ थिर्ंकर्स सोसाइटी लगायतको सहयोग रहेको छ । बाढी र पहिरोमा परेकाहरूको र बिस्थापितको लागि… पुरा पढौ
पोखरा, २१ भदौ । झ्याम्म झ्याम्म, हुन्देरेलगायतका दर्जनौं लोक पप र र्‍याप गीत गाएर श्रोता दर्शकमाझ छुट्टै छाप छाड्न सफल डिमर्चा 'डिमर्चा’ दसैं गीत लिएर श्रोतामाझ आएको छ। 'दशैं आयो’ बोलको गीत लिएर आएको ब्याण्डको यो गीत फङ्की रक प्याट्रनमा छ। नयाँ टिम मेम्बरसहित फेरि एकपटक जुमुराउने प्रयासस्वरुप नयाँ गीत रेर्कर्डमा आफूहरु लागेको डिमर्चाका प्रमुख भोकलिष्ट भाष्करध्वज श्रेष्ठले जानकारी दिए। झण्डै… पुरा पढौ
पोखरा १८, भदौ। पुष्पाञ्जली फेस एण्ड इभेन्ट प्रालिले आयोजना गरेको मिस कल्चर नेपालको चौंथो संस्करणको ट्यालेन्ट शो सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा १४ जना प्रतिश्पर्धीले आ-आफ्नो मौलिक प्रतिभा प्रस्फुटन गरेका थिए। अडिसनमा उपस्थित २५ जना मध्येबाट १४ जनालाई छनौट गरी ट्यालेन्ट राउण्डमा प्रवेश गराइएको आयोजकले जनाएको छ। ट्यालेन्ट राउण्टको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि पोखरा लेखानाथ उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार… पुरा पढौ
पोखरा, १७ भदौ। नेशनल प्याव्सान कास्कीको आयोजनामा पाँचौँ अन्तरविद्यालयस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता भएको छ। प्रतियोगितामा वरिष्ठ कलाकार दुर्गा बराल 'वात्स्यायन’ ले कलाकारितामात्र नभई सम्पूर्ण क्षमताको विकासमा विद्यालयको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गरे। कलाबिनाको जीवन सरस हुन नसक्ने बताउँदै उनले पोखरेली माटोमा कलाको बीउ अत्यन्त सुन्दर तरिकाले मौलाउने यथार्थ हृदय·म गर्दै निरन्तर कलाको विकासमा लागेर प्रदेश नं. ४ र सिङ्गो देशको कलामा… पुरा पढौ
‘राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान’ गीतकार थापालाई
काठमाडौँ, १३ भदौ। गीतकार संघ नेपालले विसं २०७३ को राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान गीतकार राजेन्द्र थापालाई प्रदान गरेको छ। संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको 'वर्ष गीत पुरस्कार’ गीतकारद्वय नृपध्वज खड्का र सुवास संगम राईलाई प्रदान गरिएको छ। उनीहरुलाई जनही रु २५ हजार पाँच सय र सम्मानपत्र दिइयो। एक जनालाई प्रदान गरिने रु ५१ हजार राशिको उक्त पुरस्कार छनोट समितिले दुर्इ… पुरा पढौ
पोखरा, १२ भदौ। सिटी रेवान पोखराले छैटौ संस्करणको सिटी रेवान महोत्सव तथा फुड फेस्टिबल असोज २ देखि ११ गतेसम्म नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्ने भएको छ । एक सय २५ स्टल रहने महोत्सवमा एक लाख दर्शक भित्र्याउने र १० करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका महासचिव जीवन दाहालले व्यावसायिक प्रयोजनका ९५, रेष्टुरेण्टका लागि १०, सामाजिक… पुरा पढौ
पोखरा, १२ भदौ। एपी-१ टेलिभिजनले आयोजना गरेको रियालिटी शोमा उत्कृष्ट चारभित्र पर्न सफल बुद्ध लामा पोखराका गौरव भएको भन्दै उनलाई जिताउन अभियान थालिएको छ । त्रिवेणी संगीतालयद्वारा पोखरामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले लामालाई जिताउन सबैलाई आग्रहसमेत गरे । कलाकार लामा सानै उमेरदेखि संगीत क्षेत्रमा लागेको र आफ्नै क्षमताले उक्त कार्यक्रममा उत्कृष्ट रहेको सहभागीले उल्लेख गरे। संगीत क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै… पुरा पढौ
पोखरा, ९ भदौ । नेपाल तरुण दल कास्कीले बाढीपीडित सहयोगार्थ पोखरामा शनिबार 'आपतमा राहतको हातेमालो’ सांगीतिक साँझ कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा कलाकार तथा गायक कर्णदास, रामभक्त जोजिजु, विनोद बानियाँ, योगेश काजी, मर्कुक दास,र्र् इतु जोजिजु, विवेक श्रेष्ठ, सन्तोष बस्याललगायतले प्रस्तुति राखे । उक्त कार्यक्रम अवसरमा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाको सहयोगबाट झण्डै तीन लाख संकलन भएको जनाइएको छ । कास्कीलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा वर्षायाममा… पुरा पढौ
पोखरा, १० भदौ। पोखरा ११, फूलबारीमा भएको तीजगीत प्रतियोगितामा धरहरा आमा फूलबारी समूह प्रथम भएको छ। फूलबारी क्लबको मुख्य आयोजना र वडा नं. ११ का महिला तथा आमा समूह सहआयोजनामा भएको प्रतियोगितामा आदर्श समाज समूह द्वितीय, सिद्धेश्वर महिला समूह तृतीय र कालिका आमा समूह काहुँ सान्त्वना भए। उत्कृष्ट नृत्यमा प्रगति टोल आमा समूह र भेषभूषामा मुना बास्तोला अधिकारीको समूहले प्राप्त… पुरा पढौ
एपीएफलाई उपाधि, सरस्वती उत्कृष्ट
पोखरा, ८ भदौ । नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजको आयोजनामा भएको रेडबुल महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले जितेको छ । तीज अवसरमा बिहीबार इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविको खेल मैदानमा भएको फाइनलमा चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी शिवम् न्यू डायमण्ड एकेडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गराउँदै एपीएफले दोस्रो पटक उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो । पहिलो संस्करणमा नेपाल पुलिसलाई हराउँदै उपाधि जितेको उसले त्यसयता लगातार… पुरा पढौ